XOG Waa Dalkee Ku Guulaystaha Badda Cas,Geeska Afrika,Khaliijka Iyo Faro Galinta Xiisada Itoobiya - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia XOG Waa Dalkee Ku Guulaystaha Badda Cas,Geeska Afrika,Khaliijka Iyo Faro Galinta Xiisada Itoobiya
HomeMaqal Iyo MuuqaalXOG Waa Dalkee Ku Guulaystaha Badda Cas,Geeska Afrika,Khaliijka Iyo Faro Galinta Xiisada Itoobiya
XOG Waa Dalkee Ku Guulaystaha Badda Cas,Geeska Afrika,Khaliijka Iyo Faro Galinta Xiisada Itoobiya
November 22, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 0
Si dhabta loo fahmo dhaqdhaqaaqa, qofku waa inuu ku bilaabaa labadan su’aalood ee muhiimka ah:
Maxaa ka kooban gobolka Badda Cas?
Maxay yihiin waddammada iyo hay’adaha ay tahay inay halkaas ku aasaasaan habab nabadeed iyo iskaashi nabadgelyo?
Su’aalahani waa aasaas, jawaabahooduna waa kuwo Wani.
Dowladaha ku teedsan badda, jilayaasha gobolka, iyo quwadaha caalamiga ah dhammaantood waxay leeyihiin dano ay ku ilaalinayaan oo ay ku xaqiijinayaan marinka lacag la’aanta ah ee loo maro mid ka mid ah jidadka ganacsiga ugu halista badan adduunka. Haddana sidoo kale waa mid ka mid ah gobollada adduunka ugu xasilloon.
Maqaallada ayaa ka tarjumaya aragtida ka imanaya falanqeeyayaasha hormoodka ah iyo kuwa dejiya siyaasadaha labada daan ee Badda Cas. Gobollo badan oo ka tirsan Geeska Afrika oo dhan ayaa ku jira xaalad kala guur ah, oo la kulmaya culeysyo siyaasadeed oo culus haddii aysan ahayn fallaago furan.
Suudaan , oo u kala gooshaya Khaliijka iyo Geeska dhaqan ahaan, waxay la halgameysaa isu dheelitirka la tacaalida cabashooyinkii hore ee aan la dejin iyo maareynta rajooyinka laga qabo dhaqdhaqaaqyada caanka ah, kuwa milateriga, iyo danaha gobolka.
Xadka Itoobiya ee qaab dhismeedka dastuuriga fitnada Al-federalist loo bandhigi by dibad sii bulshada, kala qaybsanaanta gobolka, iyo dagaalada u dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowladaha istiraatiiji durugsan.
Cadaadisyo heer gobol iyo gudaha ah ayaa kusii kordhaya dowladda Ereteriya halka Soomaaliya ay isku dayeyso inay ka baxdo meertada seddex sano ee xasilooni darrada ah.
Masar, oo ah awooda taariikhi ah ee Badda Cas, kuma raaxeysato awooddaas isu yeertay inay dejiso shuruudaha iskaashiga Afrika iyo Khaliijka. Bangiga bari ee Badda Cas wuxuu sidoo kale wajahayaa xasillooni darro iyo kala-guurno adag. Waa gobol ku yaal meel muhiim u ah isbeddelka. Arimaha ugu waawayn waxaa kamid ah: dagaalka Yemen, loolanka wadamada khaliijka, hoos udhaca dhaqaale ee kiciya inta badan qiimaha saliida oo burbura, iyo jagooyinka looqaadayo aqoonsiga Israel.
DEG DEG:Itoobiya oo Qarka u saaran inay Qabsato Caasimada Tigrey-ga ee Mekelle